ဖွားယောငျးသှေးဆောငျသောအမှောငျည – My Blog
ကမြနာမညျ ခမျြးအေး မအေးခမျြးတဲ့ ဘဝကို ပွောပွခငျြမိတယျ။ ကမြကို မှေးပွီးပွီးခငျြး အမကေ မီးတှငျးထဲ ဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ အဖကေ နောကျအိမျထောငျထူပွီး ကမြကို မှေးစားမိဘလကျထဲ ထညျ့ခဲ့ပွီး တမွို့တရှာကို ထှကျသှားခဲ့ပါတယျ။ မှေးစားမိဘတှကေ ကြောငျးထားပေးလို့ ၁၀တနျး ထိရောကျခဲ့ပမေယျ့ ၁၀တနျးနှဈမှာ မှေးစားမိဘတှေ ကားမှောကျလို့ ဆုံးသှားကတြယျ။ အျော ပွောဖို့ကနျြနခေဲ့တယျ။ မှေးစားမိဘတှကေ အိမျဆိုငျလေး ဖှငျ့ထားတယျ။ သားအရငျးတဈယောကျရှိတယျ။ သူတို့ဆုံးသှားတော့ ကမြ ကြောငျးထှကျပွီး ဆိုငျတာဝနျ ယူလိုကျရတယျ။ အကိုက တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားကွီး ကြောငျးပိတျရကျဆို ကမြတို့မွို့ကိုပွနျလာတယျရှငျ့။ သူပိုငျတဲ့အိမျ သူပိုငျတဲ့ဆိုငျ သူ့သဘောပေါ့။ နောကျဆုံးနှဈ စာမေးပှဲပွီးရငျ မိနျးမ ခိုးလာမယျဆိုပွီး အခနျးပွငျခိုငျးထားတယျ။ စာမေးပှဲပွီးတော့ ခေါငျးငိုကျစိုကျနဲ့တဈယောကျတညျး ပွနျလာခဲ့တယျ။ ကမြတို့လညျး မမေးရဲဘူးရှငျ့။ နနေ့ညေ့ည အရကျတှသေောကျ လူမှနျသူမှနျးမသိအောငျမူးရူးနတေတျတယျ။ တနမှေ့ာတော့………….. ………………………… ………………………… …………………………. လြှောကျမတှေးနဲ့ရှငျ့ မြွု့မိမွို့ဖဆှမြေိုးတှကေ သငျ့တျောတယျဆိုပွီး ကမြတို့ကို အိမျထောငျခပြေးကတြယျ။ ကမြလညျး ရီးစားမရှိ အကိုကလညျး မငွငျးတော့ ညားသှားတာပေါ့။ အရငျကတညျးက လေးစားခဲ့တဲ့အကို့အပျေါ လေးလေးစားစားပဲဆကျဆံတယျရှငျ့။ အိမျထောငျကပြွီး အကို ပုံစံတှေ ပွောငျးလာတယျ။
ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှော မသိသာပမေယျ့ ညဆို အရမျးကွမျးတမျးလာတယျ။ အိပျယာပျေါက ကိစ်စရငျ ဘယျကမလဲ ရိုကျနှကျနှိပျစကျခငျြလာတယျ။ မနကျကြ လညျး ဆိုငျလုပျငနျးတှကေို ကမြနဲ့ ကူလုပျပေးပွနျရော။ အိပျယာပျေါက ကိစ်စလား။ ပွောပွမှာပေါ့။ မင်ျဂလာဦးညက စပွောရမယျ။ မင်ျဂလာဆောငျတယျ။ည ရောကျတယျ။ အကိုက အရကျသောကျနတေယျ။ အိပျနှငျ့တဲ့။ ကမြလညျး အကို့ကို ကနျတော့ပွီး အိပျယာဝငျခဲ့တယျ။ ကမြကို တဈစုံတဈယောကျ စောငျ့ ကွညျ့နတေယျလို့ ခံစားမိပွီး ကမြလနျ့နိုးလာတယျ။ အဲ့ဒီနောကျတော့ အကိုက “နိုးပွီလား” “ဟုတျအကို အကိုမအိပျသေးဘူးလား။” “မငျးနဲ့အိပျမှာ” ကြ မလညျး ကွားဖူးနားဝနဲ့ ရငျတုနျပနျးတုနျရှငျ့ ခုတငျပျေါ တကျလာပွီးတော့ ညအိပျ တဈပတျရဈအကငြ်္ီကို ဆှဲဖွဲခံလိုကျရတယျ။ အခုအခံမပါတဲ့ ကမြရဲ့ နို့၂လုံးလညျး ရှငျးရှငျးလငျးလငျးထှကျလာတယျ။ “အကို မီးပိတျလိုကျပါ့လား ညီမရှကျတယျ” ဘီလူးသရဲစီးနတေဲ့ အကိုက ကမြထမီကို ဆှဲခြှတျပွီး သူ့ အဝတျအစားတှကေို ခြှတျလှငျ့လိုကျတယျ။
အိုး အကို့ဟာကွီးက “အမလေးလေး” ကမြလညျး ယောကျြား လိငျအင်ျဂါတှေ မွငျသငျ့သလောကျမွငျဖူးပါတယျ။ အကို့ဟာကတော့ ကမြမွငျဖူးတာနဲ့မတူ ဘူး။ အဖုအထဈတှနေဲ့၇လကျမ၈လကျမလောကျရှညျမယျ။ ထိပျပိုငျးမှာကွီးပွီး အရငျးမှာသေးသှားတယျ။ ကမြရဲ့ အုပျထားတဲ့ လကျတှကေိုဖယျပွီး ကမြ ပိပိအဝကို သူ့ဟာကွီးနဲ့ လာထောကျတယျ။ သူ့ဟာနဲ့ပှတျပေးနတေော့ ဘယျလိုခံစားရမှနျးမသိဘူး။ ဗိုကျပဲဆာသလို ရပေဲငတျသလိုနဲ့ နမေရထိုငျမရ အဖြားတကျသလိုလိုပဲ။ပိပိတဈခုလုံး စိုရှဲနတောပဲ။ အကို့ဟာကွီး ကမြထဲကို ဝငျလာနတော သိလိုကျရတယျ။ တဖွညျးဖွညျး ပွညျ့ကပျြနအေောငျ ဝငျလာ တာနဲ့အတူ နာကငျြမှုကို ခံစားလိုကျရတယျ။ နှုတျခမျးကိုကိုကျပွီး နာကငျြမှုကို အံတုနတေုနျး ကမြကို ဖကျပွီး အကို တဆုံးဆောငျ့ခလြိုကျတော့ စူးစူးဝါးဝါး နာကငျြမှုနဲ့ အတူ အားးး…….. ကမြ အကယျြကွီး အျောလိုကျမိတယျ။ ကမြအျောသံက အားတကျသှားစတောလားမသိဘူးရှငျ။ မနားမနေ ဆောငျ့ပါတော့ တယျ။ “အမေ့ အကိုရေ တျောပါတော့ နာလို့ပါ” “အမရေေ ကယျပါဦး” “အား အား” ပိပိတခုလုံး ပှနျးစုတျနပွေီး စပျနပေါတယျ။ အကို့ရဲ့ အဖုအထဈ အပွညျ့နဲ့ဟာကွီးက ပါးစပျက ပေါကျထှကျမလားထငျရအောငျ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးဆောငျ့ပါတယျ။
တျောပါတော့လို့ ပွောမိရငျ ပါးတှရေိုကျတယျ။ နို့တှကေို ပွတျထှကျမတတျဆှဲညှဈထားတယျ။ ဆံပငျတှကေို ဆောငျ့ဆှဲတယျ။ ကမြရဲ့ နို့တှကေို ဆှဲပွီး ဆောငျ့အားသနျသနျနဲ့ဆောငျ့ပွီး ငွိမျသှားပါတယျ။ ကမြကိုယျပျေါမှောကျပွီး ငွိမျနတေဲ့ အကို့ကို ဘေးဖကျတှနျးခလြိုကျပွီး ကမြ သနျ့စငျခနျးထဲဝငျခဲ့တယျ။ ကမြ အောကျပိုငျးတခုလုံး သှေးတှနေဲ့လူးနပေါတယျ။ ရဆေေးသနျ့စငျတော့ ဖူးယောငျနတေဲ့ပိပိက အထိမခံနိုငျဘူးရှငျ။ ဗိုကျတှလေညျးအောငျ့ ပေါငျ လညျးစိလို့မရ လမျးလြှောကျရငျ ကှတတနဲ့ ခံရခကျပါတယျ။ နို့တှမှော အညိုအမဲစှဲပွီး ပါးတှနောကငျြနပေါတယျ။ မနကျကြ ခေါငျးဖီးတော့ ဆံပငျအကြှတျ တှေ အမြားကွီး ဘီးထဲပါလာတယျ။ အဲဒီနကေ့ စပွီး ကမြဘဝ ညတိုငျးညတိုငျး အရှငျလတျလတျ ငရဲကတြော့တာပဲ။ အကို ညတိုငျး အရကျတှအေရမျး သောကျလာတယျ။ မူးပွီးအိပျတဲ့နတှေ့ဆေို ကမြ လောကငရဲက လှတျမွောကျရာပေါ့။ နတေို့ငျးမူးပါစေ ဆုတောငျးနရေငျး အိမျမှာပါ အရကျပုလငျးဆောငျ ထားတတျခဲ့တယျ။ အရကျဆိုငျကနေ အရကျသမား အပေါငျးအသငျးတှေ အိမျချေါလာပွီး ဝိုငျးဖှဲ့လာပါတယျ။ ကမြ အမွညျးလကျရာ ကောငျးလို့ဆိုပဲ။
အပေါငျးသငျးတှကေ အရကျဝယျ သူက အမွညျးကြှေး အပွနျအလှနျပေါ့။ အရကျသောကျတဲ့သူတှထေဲကမှ ကိုအာကာဆိုတဲ့ အပေါငျးအသငျးကို သူအခငျ ဆုံးပဲ။ ကွာလာတော့ ကနျြတဲ့သူတှေ ပွနျပမေယျ့ ကိုအာကာကတော့ အိမျမှာ အိပျတတျလာတယျ။ အကို မမူးတဲ့နတှေ့မှော ကမြရဲ့ ငရဲခနျးတှကေို ကို အာကာ သိသှားခဲ့တယျ။ ကမြကို ဂရုဏာ မကျြဝနျးတှနေဲ့ ကွညျ့တတျလာတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အရကျဝိုငျးသိမျးပွီး အပေါငျးသငျးတှပွေနျကုနျကတြယျ။ မူး မှောကျနတေဲ့ အကို့ကို ကိုအာကာနဲ့ အခနျးထဲတှဲပို့ရငျး အိပျယာပျေါ အကို့ကို ခသြိပျလိုကျတယျ။ အကို့ပုဆိုး လနျသှားပွီး အကို့ဟာကွီး ပျေါသှားတယျ။ “နညျးတာကွီး မဟုတျဘူးနျော အမတော့ အျောနရေမှာပဲ” အကို့ပုဆိုးကို ဖုံးဖိရငျး မကျြနှာငုံ့ထားပွီး “အငျး” ” အမ အကို့ဟာကိုကွိုကျလား။အကို လိုးတာ ကနြျောမွငျတယျ အမ နာတာပဲ သိမယျထငျတယျ။” စိတျထဲ ရှကျပမေယျ့ ပွနျပွောခငျြနမေိတယျ။ “ဟုတျတယျ အမကွောကျနပွေီ။” “အမ ပွီးဖူး လားဟငျ” ကမြမော့ကွညျ့မိတယျ။
ကမြနားမလညျဘူးလေ။ “အမ” တိုးတိုးလေး ချေါပွီး နဖူးကို ငုံ့နမျးလာတယျ။ မတျောဘူးဆိုတဲ့ အသိရှိပမေယျ့ ကမြ မရုနျးကနျပဲ ငွိမျသကျနမေိတယျ။ မကျြနှာ အနှံနမျးပွီး သူ့အနမျးတှကေ နှုတျခမျးဖြားမှာ အဆုံးသတျသှားတယျ။ ခေါငျးကို ဆှဲမော့ပွီး ကမြနှုတျခမျးတှကေို စုပျနမျးနတေယျ။ အသကျရှူမဝ တော့ဘူး။ ရငျဘတျတှကေော့တတျလာမိတယျ။ သူ့လကျတှေ ကမြနောကျကြောကို ဖှဖှလေး ပှတျသပျပေးနတေယျ။ အကငြ်္ီကွယျသီးလေးတှေ တခုခငျြး ဖွုတျနတောကို သိပမေယျ့ အလိုကျသငျ့နပေေးမိပွနျတယျ။ နောကျကြောကို လကျလြှိုပွီး ဘျောလီ အကငြ်္ီခြိတျတှဖွေုတျနတေယျ။ ကမြ အနားမှာ အကို ရှိတာကိုပါ မနေ့မေိပွီ။နှုတျခမျးကို နမျးတာမလှတျပဲ လကျတှကေ ကမြနို့တှကေို ဖှဖှလေးပှတျပေးနတေယျ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ထောငျလာတယျ။ နို့သီး ထိပျလေးတှကေို လကျမ လကျညှိုးသုံးပွီး ခပြေေးတယျ။ “အငျး ဟငျး ဟငျးးးး” ညညျးသံတှေ အလိုလို ထှကျကလြာတယျ။ အနမျးတှကေို လှတျပွီး ကြ မကို အိပျယာပျေါ လှနျခလြိုကျတယျ။ အိုး အကို အိပျနတေဲ့ အကို့ကို မွငျပွီး ကမြစိတျထဲ ငိုမလို ရီမလို။
“ဟငျ့အငျ” မသိမသားလေး ရုနျးမိတယျ။ သူက လှတျမပေး။ ကမြနို့တှကေို ဘယျညာပွောငျးပွီး အငမျးမရစို့တယျ။ အ့ အို အရှိနျလေးတတျလာတော့ ကမြ မရုနျးမိတဲ့ အပွငျ ပါးစပျထဲက ကြှတျမှာတောငျ ကွောကျနပွေီ။ သူ မကျတပျရပျလိုကျတယျ။ ကမြကို ထားသှားတော့မှာလား။ မဝံ့မရဲ ကွညျ့မိတယျ။ သူက ကမြကို ပွုံးပွပွီး ကမြ ခွထေောကျတှကေနေ ကုတငျစှနျးထိ ဆှဲခသြှားတယျ။ အိုး “အကို နိုးမယျ” “မူးနေ တရေးတောငျနိုးလို့လား။ဒီနပေို့တိုကျ ထားတယျ။ စိတျမပူနဲ့။” “ဟငျ ကွိုကွံထားတာလား” “ဟကျ ဟုတျတယျ အမ” စကားပွောနရောကနေ ကုတငျအောကျ ခွခေပြွီး ကော့ကော့ကွီးဖွဈနေ တဲ့ ကမြထမီကို လှနျပွီး ကမြပေါငျတှကေိုနမျးတယျ။ ပွီးတော့ ဆီးခုံမှေးလေးတှကေို လကျနဲ့ မနာအောငျ ဆှဲတယျ။ သူ့လြှာကွီးနဲ့ ပေါငျတှကေို လြှကျ တယျ။ ပေါငျနှဈခြောငျးကိုဆှဲကားလိုကျတယျ။ လကျမနဲ့ ကမြ အရသာဖူးလေးကို ဖိခပြေေးတယျ။ လကျနှဈဖကျနဲ့ အကှဲကွောငျးလေးကိုဖွဲပီး လြှာနဲ့ကလိ နတေယျ။
အိုး အို ကမြ ဖငျကွီးတှေ ကွှတကျလာတယျ။ ကမြအစိကျု ဖိစုပျပွီး လကျနဲ့ လိုးပေးနတေော့ အားး အ့ အို အခငျးကို ကဈြကဈြပါအောငျ ဆှဲထားမိတယျ။ အ့အ့ ကော့တကျလာပွီး တကိုယျလုံးကရှိသမြှ အားတှေ သှနျခလြိုကိသလို ဝုနျးကနဲ ပွနျကလြာတယျ။ ဖုတျလှိုကျဖုတျလှိုကျနဲ့ အသကျရှူလို့မဝ ရထေဲက ငါး ကုနျးပျေါပဈတငျသလို ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျဖွဈနတေယျ။ သူလေ သူ့ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျတယျ။ ကမြ သူ့ကို သခြော ကွညျ့မိတယျ။ သူ့လိငျတံကလေ အရမျးမကွီးဘူး အနတေျောပဲ။ ဖွောငျ့တနျးနတေယျ။ ထိပျဖူးက ပဈတော့မယျ့ ဒုံးပြံလို ထောငျနတေယျ။ သူ့က ကမြအဝကို တပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြး အရသာခံသှငျးနတေယျ။ ကမြမနနေိုငျတော့ဘူး ခါးကိုကော့လိုကျမိတယျ။ ဒုတျခနဲ သားအိမျကို ဆောငျ့မိတယျ။ ဘယျလို အရသာရယျလို့ မပွောတတျဘူး။ အထုတျအသှငျး စညျးခကျြညီညီနဲ့ ဆောငျ့ပေးနတေယျ။ ကမြလေ ကော့ကော့ပေးမိတယျ။ သူ့လီးကွီး ကမြထဲက ထှကျသှားမှာစိုးပွီး ညှဈညှဈထားမိ တယျ။ “အိုး ကောငျးလိုကျတာ အမရယျ” သူ့အသံကွားတော့ ကမြ ပိုပိုညှဈပေးမိတယျ။ အိုး အမ မရတော့ဘူး။ ဘေးမှာ အိပျနတေဲ့ ယောကျြားရှလေု့ပျရ တာ ပို စိတျတှကွှေနမေိတယျ။ သူ့ရဲ့ဆောငျ့ခကျြတှေ မွနျဆနျလာပွီး ကမြ အထဲကလညျး ကငျြလာတယျ။ သားအိမျကို လာထိတဲ့ သုတျရညျတှနေဲ့အတူ ကမြ အသှေးအသားတှလေညျး ထှကျကကြုနျပွီထငျတယျ။ ကမြ မခံစားဘူးတဲ့ အရသာအသဈကို ခံစားမိလိုကျတယျ။ မဖွဈသငျ့မှနျးသိပမေယျ့ ဖွားယောငျးတဲ့ အမှောငျနောကျ တကောကျကောကျ လိုကျနမေိတော့ပါတယျ။
ကျမနာမည် ချမ်းအေး မအေးချမ်းတဲ့ ဘဝကို ပြောပြချင်မိတယ်။ ကျမကို မွေးပြီးပြီးချင်း အမေက မီးတွင်းထဲ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ထူပြီး ကျမကို မွေးစားမိဘလက်ထဲ ထည့်ခဲ့ပြီး တမြို့တရွာကို ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မွေးစားမိဘတွေက ကျောင်းထားပေးလို့ ၁၀တန်း ထိရောက်ခဲ့ပေမယ့် ၁၀တန်းနှစ်မှာ မွေးစားမိဘတွေ ကားမှောက်လို့ ဆုံးသွားကျတယ်။ အော် ပြောဖို့ကျန်နေခဲ့တယ်။ မွေးစားမိဘတွေက အိမ်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတယ်။ သားအရင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ဆုံးသွားတော့ ကျမ ကျောင်းထွက်ပြီး ဆိုင်တာဝန် ယူလိုက်ရတယ်။ အကိုက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကြီး ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ကျမတို့မြို့ကိုပြန်လာတယ်ရှင့်။ သူပိုင်တဲ့အိမ် သူပိုင်တဲ့ဆိုင် သူ့သဘောပေါ့။ နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲပြီးရင် မိန်းမ ခိုးလာမယ်ဆိုပြီး အခန်းပြင်ခိုင်းထားတယ်။ စာမေးပွဲပြီးတော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျမတို့လည်း မမေးရဲဘူးရှင့်။ နေ့နေ့ညည အရက်တွေသောက် လူမှန်သူမှန်းမသိအောင်မူးရူးနေတတ်တယ်။ တနေ့မှာတော့………….. ………………………… ………………………… …………………………. လျှောက်မတွေးနဲ့ရှင့် မျြု့မိမြို့ဖဆွေမျိုးတွေက သင့်တော်တယ်ဆိုပြီး ကျမတို့ကို အိမ်ထောင်ချပေးကျတယ်။ ကျမလည်း ရီးစားမရှိ အကိုကလည်း မငြင်းတော့ ညားသွားတာပေါ့။ အရင်ကတည်းက လေးစားခဲ့တဲ့အကို့အပေါ် လေးလေးစားစားပဲဆက်ဆံတယ်ရှင့်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး အကို ပုံစံတွေ ပြောင်းလာတယ်။
ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ မသိသာပေမယ့် ညဆို အရမ်းကြမ်းတမ်းလာတယ်။ အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စရင် ဘယ်ကမလဲ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ချင်လာတယ်။ မနက်ကျ လည်း ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ကျမနဲ့ ကူလုပ်ပေးပြန်ရော။ အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စလား။ ပြောပြမှာပေါ့။ မင်္ဂလာဦးညက စပြောရမယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ည ရောက်တယ်။ အကိုက အရက်သောက်နေတယ်။ အိပ်နှင့်တဲ့။ ကျမလည်း အကို့ကို ကန်တော့ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့တယ်။ ကျမကို တစ်စုံတစ်ယောက် စောင့် ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားမိပြီး ကျမလန့်နိုးလာတယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ အကိုက “နိုးပြီလား” “ဟုတ်အကို အကိုမအိပ်သေးဘူးလား။” “မင်းနဲ့အိပ်မှာ” ကျ မလည်း ကြားဖူးနားဝနဲ့ ရင်တုန်ပန်းတုန်ရှင့် ခုတင်ပေါ် တက်လာပြီးတော့ ညအိပ် တစ်ပတ်ရစ်အင်္ကျီကို ဆွဲဖြဲခံလိုက်ရတယ်။ အခုအခံမပါတဲ့ ကျမရဲ့ နို့၂လုံးလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်လာတယ်။ “အကို မီးပိတ်လိုက်ပါ့လား ညီမရှက်တယ်” ဘီလူးသရဲစီးနေတဲ့ အကိုက ကျမထမီကို ဆွဲချွတ်ပြီး သူ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လွှင့်လိုက်တယ်။
အိုး အကို့ဟာကြီးက “အမလေးလေး” ကျမလည်း ယောကျာ်း လိင်အင်္ဂါတွေ မြင်သင့်သလောက်မြင်ဖူးပါတယ်။ အကို့ဟာကတော့ ကျမမြင်ဖူးတာနဲ့မတူ ဘူး။ အဖုအထစ်တွေနဲ့၇လက်မ၈လက်မလောက်ရှည်မယ်။ ထိပ်ပိုင်းမှာကြီးပြီး အရင်းမှာသေးသွားတယ်။ ကျမရဲ့ အုပ်ထားတဲ့ လက်တွေကိုဖယ်ပြီး ကျမ ပိပိအဝကို သူ့ဟာကြီးနဲ့ လာထောက်တယ်။ သူ့ဟာနဲ့ပွတ်ပေးနေတော့ ဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိဘူး။ ဗိုက်ပဲဆာသလို ရေပဲငတ်သလိုနဲ့ နေမရထိုင်မရ အဖျားတက်သလိုလိုပဲ။ပိပိတစ်ခုလုံး စိုရွှဲနေတာပဲ။ အကို့ဟာကြီး ကျမထဲကို ဝင်လာနေတာ သိလိုက်ရတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်ကျပ်နေအောင် ဝင်လာ တာနဲ့အတူ နာကျင်မှုကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပြီး နာကျင်မှုကို အံတုနေတုန်း ကျမကို ဖက်ပြီး အကို တဆုံးဆောင့်ချလိုက်တော့ စူးစူးဝါးဝါး နာကျင်မှုနဲ့ အတူ အားးး…….. ကျမ အကျယ်ကြီး အော်လိုက်မိတယ်။ ကျမအော်သံက အားတက်သွားစေတာလားမသိဘူးရှင်။ မနားမနေ ဆောင့်ပါတော့ တယ်။ “အမေ့ အကိုရေ တော်ပါတော့ နာလို့ပါ” “အမေရေ ကယ်ပါဦး” “အား အား” ပိပိတခုလုံး ပွန်းစုတ်နေပြီး စပ်နေပါတယ်။ အကို့ရဲ့ အဖုအထစ် အပြည့်နဲ့ဟာကြီးက ပါးစပ်က ပေါက်ထွက်မလားထင်ရအောင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆောင့်ပါတယ်။
တော်ပါတော့လို့ ပြောမိရင် ပါးတွေရိုက်တယ်။ နို့တွေကို ပြတ်ထွက်မတတ်ဆွဲညှစ်ထားတယ်။ ဆံပင်တွေကို ဆောင့်ဆွဲတယ်။ ကျမရဲ့ နို့တွေကို ဆွဲပြီး ဆောင့်အားသန်သန်နဲ့ဆောင့်ပြီး ငြိမ်သွားပါတယ်။ ကျမကိုယ်ပေါ်မှောက်ပြီး ငြိမ်နေတဲ့ အကို့ကို ဘေးဖက်တွန်းချလိုက်ပြီး ကျမ သန့်စင်ခန်းထဲဝင်ခဲ့တယ်။ ကျမ အောက်ပိုင်းတခုလုံး သွေးတွေနဲ့လူးနေပါတယ်။ ရေဆေးသန့်စင်တော့ ဖူးယောင်နေတဲ့ပိပိက အထိမခံနိုင်ဘူးရှင်။ ဗိုက်တွေလည်းအောင့် ပေါင် လည်းစိလို့မရ လမ်းလျှောက်ရင် ကွတတနဲ့ ခံရခက်ပါတယ်။ နို့တွေမှာ အညိုအမဲစွဲပြီး ပါးတွေနာကျင်နေပါတယ်။ မနက်ကျ ခေါင်းဖီးတော့ ဆံပင်အကျွတ် တွေ အများကြီး ဘီးထဲပါလာတယ်။ အဲဒီနေ့က စပြီး ကျမဘဝ ညတိုင်းညတိုင်း အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျတော့တာပဲ။ အကို ညတိုင်း အရက်တွေအရမ်း သောက်လာတယ်။ မူးပြီးအိပ်တဲ့နေ့တွေဆို ကျမ လောကငရဲက လွတ်မြောက်ရာပေါ့။ နေ့တိုင်းမူးပါစေ ဆုတောင်းနေရင်း အိမ်မှာပါ အရက်ပုလင်းဆောင် ထားတတ်ခဲ့တယ်။ အရက်ဆိုင်ကနေ အရက်သမား အပေါင်းအသင်းတွေ အိမ်ခေါ်လာပြီး ဝိုင်းဖွဲ့လာပါတယ်။ ကျမ အမြည်းလက်ရာ ကောင်းလို့ဆိုပဲ။
အပေါင်းသင်းတွေက အရက်ဝယ် သူက အမြည်းကျွေး အပြန်အလှန်ပေါ့။ အရက်သောက်တဲ့သူတွေထဲကမှ ကိုအာကာဆိုတဲ့ အပေါင်းအသင်းကို သူအခင် ဆုံးပဲ။ ကြာလာတော့ ကျန်တဲ့သူတွေ ပြန်ပေမယ့် ကိုအာကာကတော့ အိမ်မှာ အိပ်တတ်လာတယ်။ အကို မမူးတဲ့နေ့တွေမှာ ကျမရဲ့ ငရဲခန်းတွေကို ကို အာကာ သိသွားခဲ့တယ်။ ကျမကို ဂရုဏာ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ကြည့်တတ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အရက်ဝိုင်းသိမ်းပြီး အပေါင်းသင်းတွေပြန်ကုန်ကျတယ်။ မူး မှောက်နေတဲ့ အကို့ကို ကိုအာကာနဲ့ အခန်းထဲတွဲပို့ရင်း အိပ်ယာပေါ် အကို့ကို ချသိပ်လိုက်တယ်။ အကို့ပုဆိုး လန်သွားပြီး အကို့ဟာကြီး ပေါ်သွားတယ်။ “နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူးနော် အမတော့ အော်နေရမှာပဲ” အကို့ပုဆိုးကို ဖုံးဖိရင်း မျက်နှာငုံ့ထားပြီး “အင်း” ” အမ အကို့ဟာကိုကြိုက်လား။အကို လိုးတာ ကျနော်မြင်တယ် အမ နာတာပဲ သိမယ်ထင်တယ်။” စိတ်ထဲ ရှက်ပေမယ့် ပြန်ပြောချင်နေမိတယ်။ “ဟုတ်တယ် အမကြောက်နေပြီ။” “အမ ပြီးဖူး လားဟင်” ကျမမော့ကြည့်မိတယ်။
ကျမနားမလည်ဘူးလေ။ “အမ” တိုးတိုးလေး ခေါ်ပြီး နဖူးကို ငုံ့နမ်းလာတယ်။ မတော်ဘူးဆိုတဲ့ အသိရှိပေမယ့် ကျမ မရုန်းကန်ပဲ ငြိမ်သက်နေမိတယ်။ မျက်နှာ အနှံနမ်းပြီး သူ့အနမ်းတွေက နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ အဆုံးသတ်သွားတယ်။ ခေါင်းကို ဆွဲမော့ပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းနေတယ်။ အသက်ရှူမဝ တော့ဘူး။ ရင်ဘတ်တွေကော့တတ်လာမိတယ်။ သူ့လက်တွေ ကျမနောက်ကျောကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်။ အင်္ကျီကြယ်သီးလေးတွေ တခုချင်း ဖြုတ်နေတာကို သိပေမယ့် အလိုက်သင့်နေပေးမိပြန်တယ်။ နောက်ကျောကို လက်လျှိုပြီး ဘော်လီ အင်္ကျီချိတ်တွေဖြုတ်နေတယ်။ ကျမ အနားမှာ အကို ရှိတာကိုပါ မေ့နေမိပြီ။နှုတ်ခမ်းကို နမ်းတာမလွှတ်ပဲ လက်တွေက ကျမနို့တွေကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ထောင်လာတယ်။ နို့သီး ထိပ်လေးတွေကို လက်မ လက်ညှိုးသုံးပြီး ချေပေးတယ်။ “အင်း ဟင်း ဟင်းးးး” ညည်းသံတွေ အလိုလို ထွက်ကျလာတယ်။ အနမ်းတွေကို လွှတ်ပြီး ကျ မကို အိပ်ယာပေါ် လှန်ချလိုက်တယ်။ အိုး အကို အိပ်နေတဲ့ အကို့ကို မြင်ပြီး ကျမစိတ်ထဲ ငိုမလို ရီမလို။
“ဟင့်အင်” မသိမသားလေး ရုန်းမိတယ်။ သူက လွှတ်မပေး။ ကျမနို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီး အငမ်းမရစို့တယ်။ အ့ အို အရှိန်လေးတတ်လာတော့ ကျမ မရုန်းမိတဲ့ အပြင် ပါးစပ်ထဲက ကျွတ်မှာတောင် ကြောက်နေပြီ။ သူ မက်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ကျမကို ထားသွားတော့မှာလား။ မဝံ့မရဲ ကြည့်မိတယ်။ သူက ကျမကို ပြုံးပြပြီး ကျမ ခြေထောက်တွေကနေ ကုတင်စွန်းထိ ဆွဲချသွားတယ်။ အိုး “အကို နိုးမယ်” “မူးနေ တရေးတောင်နိုးလို့လား။ဒီနေ့ပိုတိုက် ထားတယ်။ စိတ်မပူနဲ့။” “ဟင် ကြိုကြံထားတာလား” “ဟက် ဟုတ်တယ် အမ” စကားပြောနေရာကနေ ကုတင်အောက် ခြေချပြီး ကော့ကော့ကြီးဖြစ်နေ တဲ့ ကျမထမီကို လှန်ပြီး ကျမပေါင်တွေကိုနမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ဆီးခုံမွှေးလေးတွေကို လက်နဲ့ မနာအောင် ဆွဲတယ်။ သူ့လျှာကြီးနဲ့ ပေါင်တွေကို လျှက် တယ်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲကားလိုက်တယ်။ လက်မနဲ့ ကျမ အရသာဖူးလေးကို ဖိချေပေးတယ်။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကိုဖြဲပီး လျှာနဲ့ကလိ နေတယ်။
အိုး အို ကျမ ဖင်ကြီးတွေ ကြွတက်လာတယ်။ ကျမအစိက်ု ဖိစုပ်ပြီး လက်နဲ့ လိုးပေးနေတော့ အားး အ့ အို အခင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆွဲထားမိတယ်။ အ့အ့ ကော့တက်လာပြီး တကိုယ်လုံးကရှိသမျှ အားတွေ သွန်ချလိုကိသလို ဝုန်းကနဲ ပြန်ကျလာတယ်။ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ အသက်ရှူလို့မဝ ရေထဲက ငါး ကုန်းပေါ်ပစ်တင်သလို ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေတယ်။ သူလေ သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။ ကျမ သူ့ကို သေချာ ကြည့်မိတယ်။ သူ့လိင်တံကလေ အရမ်းမကြီးဘူး အနေတော်ပဲ။ ဖြောင့်တန်းနေတယ်။ ထိပ်ဖူးက ပစ်တော့မယ့် ဒုံးပျံလို ထောင်နေတယ်။ သူ့က ကျမအဝကို တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း အရသာခံသွင်းနေတယ်။ ကျမမနေနိုင်တော့ဘူး ခါးကိုကော့လိုက်မိတယ်။ ဒုတ်ခနဲ သားအိမ်ကို ဆောင့်မိတယ်။ ဘယ်လို အရသာရယ်လို့ မပြောတတ်ဘူး။ အထုတ်အသွင်း စည်းချက်ညီညီနဲ့ ဆောင့်ပေးနေတယ်။ ကျမလေ ကော့ကော့ပေးမိတယ်။ သူ့လီးကြီး ကျမထဲက ထွက်သွားမှာစိုးပြီး ညှစ်ညှစ်ထားမိ တယ်။ “အိုး ကောင်းလိုက်တာ အမရယ်” သူ့အသံကြားတော့ ကျမ ပိုပိုညှစ်ပေးမိတယ်။ အိုး အမ မရတော့ဘူး။ ဘေးမှာ အိပ်နေတဲ့ ယောကျာ်းရှေ့လုပ်ရ တာ ပို စိတ်တွေကြွနေမိတယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေ မြန်ဆန်လာပြီး ကျမ အထဲကလည်း ကျင်လာတယ်။ သားအိမ်ကို လာထိတဲ့ သုတ်ရည်တွေနဲ့အတူ ကျမ အသွေးအသားတွေလည်း ထွက်ကျကုန်ပြီထင်တယ်။ ကျမ မခံစားဘူးတဲ့ အရသာအသစ်ကို ခံစားမိလိုက်တယ်။ မဖြစ်သင့်မှန်းသိပေမယ့် ဖြားယောင်းတဲ့ အမှောင်နောက် တကောက်ကောက် လိုက်နေမိတော့ပါတယ်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဖွားယောငျးသှေးဆောငျသောအမှောငျည
အခဈြဦးအတှကျ မနှမျးသေးသညျ့ ပနျးလေးတပှငျ့